Ururka KNUT laantiisa Mandera oo ku baaqay in la xalliyo dhibaatooyinka amni | Star FM
Home Wararka Kenya Ururka KNUT laantiisa Mandera oo ku baaqay in la xalliyo dhibaatooyinka amni
Ururka KNUT laantiisa Mandera oo ku baaqay in la xalliyo dhibaatooyinka amni
Ururka qaran ee macallimiinta dalka ee KNUT laanta ismaamulka Mandera ayaa waxay dowladda dhexe ugu baaqday inay wanaajiso ammaanka dowlad deegaankaasi si waxbarashada ay caadi ugu soo noqoto.
Xoghayaha ururka macallimiinta dalka ee KNUT laanta ismaamulka Mandera Maxamad Kulo ayaa kaddib markii mar labaad loo doortay xilkan sheegay in dowladda dhexe ay mas’uuliyad ka saaran tahay xaqiijinta badqabka muwaadin kasta.
Waxaa uu intaa ku daray in dowladda laga doonayo in ay hubiso in amniga Mandera uu soo hagaagayo si macallimiintu ay si joogta ah u sii wataan gudashada waajibaadkooda ee wax baridda ardayda.
Waxaa u guddiga adeegga macalimiinta ee TSC ku eedeeyay inuu beddelo barayaasha iyadoo aynan jirin sabab sidaa u sii weyn.
Xoghayaha KNUT ee Mandera ayaa xusay in xal u helidda arrin kasta ay dowladda jawaab u haysa balse ay ka caga jiideyso wanaajinta ammaanka ismaamulka Mandera.
Sida laga soo xigtay Mr. Kulo, dowladda iyada oo loo marayo guddiga adeegga macallimiinta ee TSC waa in ay raadisaa hab ay macallimiinta ku geynayso iskuullada ku yaala dowlad deegananka Mandera.
Waxaa u sheegay in Mandera ay u baahan tahay 1,849 macallimiin ah si ay u buuxiyaan gaabad dhan 294 oo ay wajahayaan dugsiyada hoose dhexe iyo 517 oo ah dugsiyada sare ee dowliga ah.
Mr .Kulo ayaa dhanka kale sheegay in macalimiin la’aanta ka jirta Mandera ay horseeday khalalaase dhanka waxbarashada ah.
Xafiiska tacliinta ee ismaamulkaasi ayaa laga soo xigtay in ugu yaraan 122 oo ah dugsiyada hoose dhexe ee dowliga ah u keliya wax ka baro hal macallin halka afar dugsiyada sare ah ay soo food saartay xaalad midaa la mid ah.
Xaaladda amni ee macallin yarida ismaamulka Mandera ayaa soo jirtay tan iyo sanadkii 2014-kii ka dib markii bas u soo socday Nairobi islamarkaana ka yimid Mandera ay wadada u galeen dagaalyahanno looga shakisan yahay in ay ka tirsanaayeen Al-Shabaab.
Waxaa ay weerarkaasi ku dileen 28 qof oo badankoodu ahaa macallimiin aan deegaankaas u dhalan iyadoona ay xilligaasi u socdeen fasaxa ciidda masiixiga.
Macalliimintaas ayaa wax ka dhigayay dugsiyo ku yaala ismaamulka Mandera.
Dowladda ayaa tan iyo wakhtigaas waxa ay ka wareejineysay Mandera macallimiinta aan deegaanka ka soo jeedin , taas oo sababtay in iskuulo badan ay macallimiin la’aan noqdaan.
Previous articleBooliska Ruushka oo xiray in ka badan 450 dibadbaxayaal ah